लासा ज्वरोका कारण १०१ नाइजेरियालीले ज्यान गुमाए
२४ माघ २०७२
२४ माघ, काठमाडौ । नाइजेरियामा फैलिएको लासानामक ज्वरोको प्रकोपका कारण १०१ जना नाइजेरियाली नागरिकको मृत्यु भएको छ । पश्चिम अफ्रिकी मुलुकले लासा ‘भारस’लाई निस्तेज पार्न सङ्घर्ष गरिरहका बेला नाइजेरियामा यसको प्रकोप देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन । सन् २०१५ को अगस्ट यता शङ्कास्पद मृतकको रगत नमुना परीक्षणपश्चात् १०१ जनामा लासाको प्रकोप भएको पुष्टि भएको छ । नाइजेरियाले सार्वजनिक सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (एनसिडिसी) ले सार्वजनिक गरेको…विस्तृत समाचार »
ग्याँष्ट्रिकका कारण दुख पाउनुभएको छ ? घरमै यसरी पार्नुहोस् ठिक
काठमाडौँ, माघ २२ पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्यालाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने ,छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्ने आदि लक्षण देखा पर्नु नै यसको लक्षण हो…विस्तृत समाचार »
हस्तमैथुन गर्नु कति ठिक, कति बेठिक ?
२३ माघ २०७२
-डा. सुमनराज ताम्राकार भनिन्छ, किशोरकिशोरी तथा युवा मनोविज्ञानको सबैभन्दा अहं हिस्सा यौन वरिपरि रुमल्लिएको छ । कौतुहलता, रहस्य र जिज्ञासाले घेरिएको यस्तो मनोदशाभित्र हस्तमैथुनबारे अनेकन भ्रम र अनुभव–अनुभूति पनि पर्छन् । स्वप्नदोष, शीघ्र पतन, लिङ्गको आकार तथा लम्बाइ, वीर्य स्खलन नहुने समस्या, लिङ्ग उत्तेजित नहुने समस्या आदि युवाका यौन जिज्ञासाभित्र पर्दछन् । यस्तै, युवतीहरूमा चाहिँ कौमार्य, योनी सुख्खा हुने समस्या, यौनेच्छामा कमी, योनी सङ्कुचन हुने…विस्तृत समाचार »
यसरी बच्न सकिन्छ जीका भाइरसबाट
एजेन्सी: अमेरिकी देशहरुमा एडिज मच्छडका कारण जीका भाइरसको बढ्दो संक्रमणप्रति विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यसबाट बच्न यी पाँच उपाय अपनाउन सकिने बताइएको छः १.विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार जीका भाइरसको संक्रमण रोक्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय मच्छडको रोकथाम नै हो । २. डब्लुएचओका अनुसार मच्छडबाट बच्नका लागि पुरै शरीर ढाकेर राख्नुस् र हल्का रंगको कपडा लगाउनुस् । ३. मच्छडको प्रजनन रोक्नका लागि आफ्नो…विस्तृत समाचार »
बार्षिक ८२ लाख मानिसलाई क्यान्सर
२१,माघ,काठमाडौं । विश्व क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुदैछ छ । ‘हामी सक्छौं, म सक्छु’ भन्ने नारासहित विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाईंदै छ । क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ भन्ने सचेतना जगाउन यो नारा तय गरिएको हो । विश्वमा हरेक वर्ष ८२ लाख मानिसलाई क्यान्सर लाग्ने गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा ७० हजारलाई क्यान्सर हुने र यसको एक तिहाई मानिसको…विस्तृत समाचार »
सम्भोगबाट पनि सर्न सक्छ खतरनाक जिका भाइरस
२०,माघ,काठमाण्डौं । लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भनिएको जिका भाइरस सम्भोगबाट पनि सरेको घटना पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको छ। अमरिकाको टेक्सस राज्यका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले मंगलबार एकजना बिरामीमा सम्भोगका कारण जिका भाइरस सरेको देखिएको दावी गरेका हुन्। डलास काउन्टी हेल्थ एण्ड ह्युमन सर्भिस डिर्पाटमेन्टका अनुसार भेनुजुयलाबाट आएका एक व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क भएपछि ती बिरामीमा जिका भाइरस सरेको देखिएको हो। सम्भोगका कारण पनि जिका भाइरस सरेको भेटिएपछि यसले रोग…विस्तृत समाचार »
बालिका बचाउने महाअभियानमा भारतीय डाक्टर
काठमाडौ । भारतका एक चिकित्सकले बालिका जन्मदा शुल्क मिनाहा गरेका छन । बालिका बचाउने अभियानमा उनले अस्पतालमा कुनै बालिका जन्मिदा निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन् । छोरी भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकत दिने परम्परागत संस्कार तथा गर्भमा छोरी रहे भ्रुण हत्या गर्ने बढ्दो कुसंस्कारका कारण भारतका कतिपय राज्यमा छोरा र छोरीको अनुपातमा डरलाग्दो असन्तुलन देखिएको छ । सन् १९६१ मा सात बर्षमुनिका हरेक १ हजार केटाका…विस्तृत समाचार »
गंभिर बिरामीबाट किन भाग्न थाले चिकित्सक ?
चिकित्सकहरुले जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचार गर्न नचाहने एक अध्ययनले जनाएको छ । चिकित्सकहरु र शल्यचिकित्सकमाझ गरिएको सो सर्वेक्षणमा ८६ प्रतिशत वेलायती चिकित्सकले रक्षात्मक शैली अपनाएको जवाफ दिएका छन् । रक्षात्मक औषधि अन्तर्गत चिकित्सकहरुले बिरामीहरुको रुची भन्दा पनि सम्भावित अदालती मुद्दामा नफस्ने एउटा परीक्षण वा उपचारलाई सुझाव दिन्छन् ।अध्ययनमा सहभागी झन्डै आधा चिकित्सक (४८प्रतिशत)ले मुद्दाको सम्भावनाको अर्थ उनीहरुले उच्च खतरामा रहेका बिरामीको उपचार गर्नबाट छुट्कारा चाहन्छन्…विस्तृत समाचार »
​पोषणमा सुधार ल्याउन कुखुरा वितरण सुरु
१९,माघ,दाङ । दाङका ९० जना नमुना किसानलाई उन्नत कुखुराका चल्ला वितरण सुरु गरिएको छ। जिल्लामा सञ्चालित सु–आहारा कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन कुखुरा वितरण गर्न थालिएको हो। कोइलावास, राजपुर र वेला गाविसका २७ जना किसानलाई प्रतिकिसान १० वटा कुखुरा प्रदान गरिएको सु–आहारा कार्यक्रमका जिल्ला कृषि अधिकृत नवीन श्रेष्ठले जानकारी दिए। जिल्लाका कोइलावास, राजपुर, वेला, डुरुवा, फूलबारी, सैघा, स्यूजा, काभ्रे,…विस्तृत समाचार »
तीन बर्षदेखि ठप्प सिडीफोर उपचार सेवा पुन : सञ्चालनमा
१८ माघ २०७२
पार्थ मण्डल,१८,माघ,झापा । झापाको भद्रपुृर स्थित मेची अञ्चल अस्पतालमा विगत तीन बर्षदेखि ठप्प भएको सिडीफोर उपचार सेवा पुन ः सञ्चालनमा आएको छ । मेची अञ्चलका एचआइभी संक्रमित बिरामीहरुलाई मध्यनजर गर्दै गत २०६९ साल मंसिरमा उपचार सेवा सुरु गरेपनि उपकरण बिग्रीएर ठप्प भएको सेवा आइतबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अस्पताल र सेवाग्राहीको माग अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगभग १५ लाख रुपैया पर्ने नयाँ सिडीफोर उपकरण उपल्बध गराइदिएपछि…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 55 56 57 58 59 Older Last ›